Soo dejisan McAfee Total Protection 16.0.R23 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudMcAfee Total Protection
Bogga rasmiga ah: McAfee Total Protection
McAfee Protection Total – waa antivirus oo leh xalalka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato dhakhso ah, buuxa ama shaandheyn ah oo ka mid ah shaashadda kombuyuutarkaaga, fedarware, nacfac, qalabka casriga ama hanjabaad kale. McAfee Total Protection waxay bixisaa ilaalinta xogta internetka iyagoo muujinaya heerka amniga bogagga shabakadaha natiijooyinka raadinta, bogagga shabakadaha phishing, waxay eegaan faylasha la soo duubay iyo dib udhigista bogga saxda ah haddii ay dhacdo khalad ah xiriiriyaha. McAfee Total Protection waxay maamuli kartaa sirta oo isticmaali kartaa si toos ah isku xirka bogagga ama barnaamijyada kale. Antivirus waxay leedahay laba dab-demiyaal oo ka hortagaya kuwa weerarka ka faa’iideysanaya dayacanka nidaamka hirgelinta si ay u helaan kombiyuutarka oo ay xadaan macluumaadka shakhsiyeed ee user. McAfee Total Protection waxay ilaalinaysaa spam, waxay ka saartaa faylasha iyada oo aan macquul aheyn soo kabashada, keydinta macluumaadka muhiimka ah ee kaydka lagu kaydiyo iyo qalabyada ku xiran shabakadda.
Antivirus iyo antispyware
Ilaalinta shabakada gurigaaga iyo xalinta arrimaha amaanka
Kaydinta macluumaadka muhiimka ah ee keydinta kaydka
Soo dejisan McAfee Total Protection
Faallo ku saabsan McAfee Total Protection
McAfee Total Protection Xirfadaha la xiriira